Akhriso: Ammaanka Magaalada Dhuusamareeb oo Caawa aad loo Adkeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Akhriso: Ammaanka Magaalada Dhuusamareeb oo Caawa aad loo Adkeeyay
Dhuusamareeb (Halqaran.com)- Magaalada Dhuusamareeb ayaa Caawa waxaa laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeeysay ee Arrimaha Doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenka oo saacado kaliya inaga xigaan xiliga loo balansan yahay inay ka dhacdo Maalinta berri ah.
Musharaxiinta kala duwan ee u tartameysa xilka Madaxweynaha Galmudug iyo kuxigeenka ayaa Caawa Dhuusamareeb waxa ay ka wadaan kulamo gooni gooni ah oo ay la qaadanayan Xildhibaanada Baarlamaanka.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa caawa waxaa Ciidamo dheeraad ah ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMiSOM caawa la dhigay wadooyinka soo gala goobta ay ka dhacayso doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug.
Waxaa sidoo kale Xaafaddaha Magaalada lagu arkaya Ciidamo aad u hubeysan, islamarkaana hubinaya gaadiidka dadweynaha.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Dr Maxamed Nuur Gacal sheegay in doorashadda Madaxweynaha ku xigeenkiisa ay ku dhici doonto xilligii loogu tala galay.
Si kastaba Jawiga Magaalada Dhuusamareeb ayaa Caawa waxaa uu yahay mid ka duwan habeenadii hore, waxaana wararka qaarkood ay sheegayaan in meelaha qaar la hakiyay dhaq-dhaqaaqyadii halkaas ka jiray, iyadoona siweyn loo adkeeyay amniag Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.